TextMagic: Sehatra hafatra an-tsoratra feno hafatra (SMS) feno | Martech Zone
Na fanamarinana anton-javatra roa na fanaovana famandrihana fisakafoanana hariva dia manomboka mahatsikaritra aho fa mahazo aina kokoa amin'ny fampiasana fandefasan-kafatra an-tsoratra (SMS) noho ny tamin'ny taona vitsivitsy lasa aho. Heveriko fa tsy izaho irery… ny mpanjifa sy ny orinasa dia faly faly mandefa sy mandray sms fa tsy manelingelina ny antso an-tariby.
Ny olana anefa dia ny fomba fitantanana ireo fifandraisana rehetra ireo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Eo no ilalaovana ny sehatra fandefasan-kafatra an-tsoratra. Miaraka amin'ny sehatra toa TextMagic, orinasa iray dia afaka mandefa fampandrenesana, fampandrenesana, fampahatsiahivana, fanamafisana ary fanentanana amin'ny marketing amin'ny SMS avy amina sehatr'asa tokana.
Antontan'isa momba ny hafatra an-tsoratra
15.2 tapitrisa ny hafatra alefa isa-minitra manerantany
95% ny hafatra an-tsoratra dia vakiana ao anatin'ny 3 minitra aorian'ny nandefasana azy
4.2 miliara ny olona mandefa hafatra an-tsoratra manerantany
90 segaondra no fotoana famaliana ho an'ny hafatra an-tsoratra
75% ny olona no aleony alefa amin'ny alàlan'ny lahatsoratra
Seho SMS izay mampitombo ny orinasanao
Alefaso amin'ny Internet ny lahatsoratra - Mandefasa lahatsoratra an-tserasera amin'ny mpiasao sy ny mpanjifanao. Ampidiro ny fifandraisana ary tantano ny lisitra rehetra ao amin'ny kaontinao TextMagic.
Mailaka amin'ny SMS - Mora ny mandefa lahatsoratra avy amin'ny mailaka. TextMagic dia mamadika ny mailakao ho lasa sms ary mandefa azy, miaraka amin'ny valiny rehetra avy eo tonga amin'ny mailaka.
SMS Gateway API - Ampidiro ny vavahady SMS an'ny TextMagic miaraka amin'ny tranokalanao na rindrambaiko mampiasa fitaovana SMS API ary ampio fandefasana hafatra amin'ny làlan'ny raharaham-barotrao.
Rindrambaiko SMS ho an'ny PC & Mac - TextMagic Messenger dia programa birao izay ahafahanao mandefa hafatra an-tsoratra kendrena amin'ny mpihaino anao, na iray isaky ny mandeha na amin'ny ankapobeny.
Chat amin'ny SMS roa-lalana - Mandefa sy mandray hafatra eo noho eo miaraka amin'ny chat SMS an-tserasera TextMagic. Izy io dia mety amin'ny fifandraisana lavitra amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa.
Lisitry ny fizarana SMS - Ny mailaka alefa any amin'ny adiresy lisitry ny fizarana dia ampitaina avy hatrany ho hafatra amin'ny telefaona finday rehetra voatahiry ao anaty lisitra.
Raiso ny SMS an-tserasera - Ampiasao ny SMS SMS natokana na nozaraina SMS handraisana SMS miditra ary hamaly ny hafatrao avy amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa.
Fandraisana an-tanana ny SMS manerantany - Vangio ny mpanjifanao sy ny mpiasao manerantany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo tambajotra finday mihoatra ny 1,000 manerana ny firenena 200+.
App ho an'ny iOS & Android - Mandefasa haingana ary mahazoa SMS, mamorona lisitra sy fifandraisana, tantano ny fampielezan-kevitrao amin'ny alàlan'ny findainao.
Zapier SMS Integrations - Ampiasao ny Zapier hampifandray TextMagic amin'ireo fampiharana tianao indrindra. Izy io dia automatique mora izay manampy ny orinasanao.
Fandraisana an-tokana ho an'ny orinasa - Midira amin'ny TextMagic amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana hanomezana antoka ireo mpikambana ao amin'ny ekipanao.
Vahaolana SMS an'ny orinasa - Ny vahaolana ao amin'ny orinasa dia misy ny hazo fanaraha-maso, fidirana miorina amin'ny andraikitra ary SSO izay singa sasantsasany izay manampy anao hitombo.
Fandinihana SMS amin'ny fanangonana valin-teny - Hatsarao ny traikefan'ny mpanjifa ary mahazoa valiny sarobidy momba ny serivisinao eo no ho eo sy avy amin'ny mpihaino rehetra.
SMS fanamarinana roa (2FA) - Manamarina ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, miantoka fifanakalozana ambany, ary ampio fiarovana fanampiny ho an'ny rindrambaiko.
Fikarohana mpitatitra & fanamarinana isa - Fantaro ireo nomeraon-telefaona sy mpitatitra tsy mandeha eo noho eo ary mahazoa vokatra tsara kokoa sy taham-panaterana amin'ny fampielezanao SMS.
Fikarohana sy fanamarinana amin'ny mailaka - Zahao ny satan'ny, ny fahaterahana ary ny haavon'ny adiresy mailaka miaraka amin'ny serivisy fanamarinana mailaka sy API an'ny TextMagic.
Manomboka amin'ny TextMagic dia tsotra
Afaka manomboka amin'ny dingana mora telo ianao. Mamorona kaonty MAIMAIMPOANA, manafatra trosa mialoha ary manomboka mandefa sy mandray lahatsoratra.
Mamorona kaonty maimaim-poana - Midira ho an'ny kaonty maimaim-poana hahitanao tena fa mora izany. Andramo ireo fiasa rehetra ary ampiasao ny trosa maimaimpoana handefasana sy handraisana hafatra saika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Manome trosa mialoha - Rehefa vonona ny handefa ny hafatra betsaka voalohany ianao dia ampiasao ny fandoavana trosa indram-bola mialoha alefanao (tsy misy fifanarahana, sarany miafina na sarany mitohy).
Mandefasa & Raiso ny SMS - Mandefasa ary mandray SMS isaky ny mila miaraka amin'ny mpampifanerasera anay tsotra ianao. Tsotra toy ny mandefa mailaka na SMS amin'ny findainao manokana izy io.
Misorata anarana amin'ny kaonty fanandramana TextMagic maimaim-poana
Fampahafantarana: a TextMagic Affiliate.
Tags: mailaka any amin'ny smsSMSsms apisehatra smshafatra an-tsoratraapi fandefasana hafatrasehatra fandefasan-kafatra an-tsoratratextmagic